☆ Indawo esembindini, ephangaleleyo ekufutshane neDyunivesithi☆ - I-Airbnb
☆ Indawo esembindini, ephangaleleyo ekufutshane neDyunivesithi☆
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguNeil
Le ndawo iphangaleleyo, iphakathi kuhambo olufutshane olusuka kwiDyunivesithi yaseDundee, iMyuziyam yeV + kunye nezona ndawo zidumileyo zekhefi, iibhari kunye neendawo zokutyela.
Ihonjiswe ngokuthandekayo kwaye ifakwe ngokupheleleyo, le ndlu ibonelela ngendawo efanelekileyo yokuhlala eDundee, eScotland. Imizuzu engama-30 ukusuka eSt Andrews, iyure enye ukusuka e-Edinburgh, kunye nekhaya leMyuziyam entsha yeV +.
* Inqaku eliya kubathengi bethu abaqhelekileyo - asikawanyusi amaxabiso ethu, indlela yamaxabiso ka-Airbnb itshintshile kwaye nezinga lobusuku ngoku libandakanya umrhumo wenkonzo yeendwendwe! *
Ifanelekile ukuhlala ixesha elide okanye elifutshane, indawo yokuhlala ibandakanya; Igumbi lokuphumla elinendawo eninzi yokuphumla, igumbi lokulala eliphindwe kabini elinokugcinwa okuninzi, ikhitshi, igumbi lokuhlambela kunye negumbi lokuhlambela elahlukileyo. Isofa enkulu kwigumbi lokuphumla igoqa ngokulula ibe yibhedi ephindwe kabini ukuze ilale indwendwe yesithathu neyesine ngelixa itafile yokutyela iphinda kabini njengendawo yokusebenza evulekileyo neqaqambileyo. Indawo yokuhlala egqibeleleyo yazo zombini iindwendwe ezihlala kunye neenkampani.
Iluncedo ngakumbi kwiindwendwe ezihlala ixesha elide, kukho umatshini wokuhlamba kunye ne-rack yokomisa onokuthi uwusebenzise kwaye (kuba abantu abaninzi bebuza) wamkelekile ukuba usebenzise isicoci ukuba uyafuna.
Kukho ivenkile enkulu engaphaya kwendlela kunye neendawo zokuzivocavoca, indawo yokuqubha, indawo yekhasino kunye nestudio seyoga zonke zihamba umgama wokuhamba. Zive ukhululekile ukunxibelelana ngezi zinto ngaphambi kokuba ufike.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo konke konke nceda ungalibazisi ukuqhagamshelana, okanye, uzive ukhululekile ukubhukisha ngoko nangoko.
Nceda ubone ezinye zeengxelo ezintle ezishiywe ziindwendwe ezimangalisayo zangaphambili!
Nceda ujonge incwadi yam yesikhokelo ngeengcebiso eziluncedo zasekhaya kwiiCafe, iindawo zokutyela kunye neevenkile ezikufutshane.
Ungeno yinkqubo yokukhangela ngokwakho usebenzisa ibhokisi yokutshixa isitshixo, kodwa ndisoloko ndifumaneka ukuqhagamshelana ukuba kuyafuneka.